आजको बिदेशी मुद्राको बिनिमयदर यस्तो छ::देश र जनताप्रति समर्पित
आजको बिदेशी मुद्राको बिनिमयदर यस्तो छ
आज भाद्र २५ गते बुधबार अमेरिकी डलर लगायत अन्य देशको विनिमयदर स्थिर छ।
अमेरिकी डलर १ को खरिदर मूल्य १ सय १४ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ ३ पैसा छ। त्यस्तै यूरोपियन यूरो १ को खरिदर मूल्य १ सय २६ रुपैयाँ २७ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय २६ रुपैयाँ ९३ पैसा छ।
त्यस्तै आज अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिदर मूल्य ७८ रुपैयाँ ४३ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ७८ रुपैयाँ ८५ पैसा रहेको छ। आज सिंगापुर डलर १ को खरिदर मूल्य ८२ रुपैयाँ ९३ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ८३ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ।
आज साउदी अरेवियन रियाल १ को खरिदर मूल्य ३० रुपैयाँ ५१ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ३० रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियालको खरिदर मूल्य ३१ रुपैयाँ ४३ पैसा छ भने बिक्रदर मूल्य ३१ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ।
आजको बिनिमय दर डलरदेखी कतारी रियालसम्म यस्तो छ
कति छ आजकाे बिनिमय दर ? अमेरिकी डलरदेखी कतारी रियालसम्म यस्ताे छ
आज कति छ अमेरिकी डलरदेखी कतारी रियलसम्मकाे बिनिमय दर ?
आजको डलरदेखि कतारी रियालसम्मको विनिमयदर
हेर्नुस आजको बिनिमय दर यस्तो छ आज शुक्रबार अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ। अमेरिकी डलर १ को खरिदर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर मूल्य १...
आजको बिनिमय दर यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंकले आज तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार छ । ...